China Ribbon Blender Manufacture and Factory | tampon
Blender kofehy marindrano dia ampiharina amin'ny sakafo, fanafody, indostria simika sns. Izy io dia ampiasaina hanamboarana vovoka samihafa, vovoka amin'ny tsiranoka misy ranoka, ary vovoka amin'ny granule. Eo ambanin'ny alàlan'ny motera, ny mixeur ribbon helix roa dia mahatonga ny fitaovana hahatratra ny fampifangaroana convective mahomby amin'ny fotoana fohy.
Blender fangaro amin'ny fifangaroana vovoka maina
Blender blender ho an'ny vovo-dronono miaraka amina tsiranoka ranoka
Blender fangaro amin'ny fampifangaroana granule
Afaka mifehy ny vokatrao ve ny mixer mixeur ribbon?
Ny kofehy ivelany dia mitondra fitaovana avy any amin'ny sisiny mankany afovoany.
Ny kofehy anatiny dia manosika ny fitaovana avy eo afovoany ka hatrany amin'ny sisiny.
Ahoana no mixer blender asa?
Volavola Blender Blender
1: Blender Cover; 2: Kabinetra elektrika sy tontonana fanaraha-maso
5: Valizy pneumatika; 6: Holder sy Mobile Caster
■ Fehikibo feno amin'ny faritra misy ny fifandraisana.
■ Ireo vy tsy misy fangarony 304, ary ny fitaratra feno nolefaka ao anaty tanky.
■ Ny famolavolana kofehy manokana dia tsy manome zoro maty rehefa mifangaro.
■ Teknolojia patanty amin'ny famehezana ny vavahady fiarovana avo roa heny.
■ Tora-drindrina somary voafintina fehezin'ny pnemika mba tsy hahatratra ny fivoahan'ny valan-tsofina.
■ Zoro boribory miaraka amina endrika famonoana peratra silipo.
■ Miaraka amin'ny fiarovana, ny fiarovana ary ny kodiarana.
■ Ny fiakarana miadana dia mitazona ny bara fijanonan'ny hydraulic mandritra ny androm-piainana.
Ahoana ny fomba hisafidianana milina mixeur blender?
1. Ny sanganasa rehetra dia ampifandraisina amina welding tanteraka. Tsy misy vovoka sisa tavela sy diovina mora aorian'ny fampifangaroana.
2. Boribory zorony sy peratra silika dia ataovy mora manadio ny fonosana blender fonosana.
3. Fangaro mixer vita amin'ny vy tsy metaly 304. Ny fitaratra feno nohosorana ao anaty fitoeran-drano mifangaro, anisan'izany ny kofehy sy hazo.
4. Ilay tampony somary mivaingana eo afovoan'ny tanky, izay miantoka tsy misy fitaovana tavela ary tsy misy zoro maty rehefa mifangaro.
5. Famolavolana tombo-kase fiarovana roa sosona miaraka amin'ny marika Alemanina Burgmann famonosana glandy dia miantoka ny fivoahan'ny aotra rehefa andrana amin'ny rano, izay napetraka ho an'ny patanty.
6. Ny famolavolana miadana miadana dia mitazona ny bara hidina mandritra ny androm-piainana.
7. Interlock, grid ary kodiarana ho an'ny fampiasana azo antoka sy mety.
Tsindrio eto raha hahazoana ny sary blender blender
Lisitry ny accessories
Stirrer tsy voatery
Ny fisehoan'ny kofehy sy fangaro blender dia mitovy. Ny hany mampiavaka azy dia ilay mpanetsiketsika eo anelanelan'ny tadiny sy ilay hoe.
Ny kofehy dia mety amin'ny vovoka sy fitaovana misy hakitroka fanidiana, ary mila hery bebe kokoa mandritra ny fampifangaroana.
Ny paddle dia mety amin'ny granule toy ny vary, voanjo, tsaramaso sns. Izy io koa dia ampiasaina amin'ny fifangaroana vovoka amin'ny fahasamihafana lehibe.
Ankoatr'izay, azontsika atao ny manamboatra ny mixer amin'ny alàlan'ny tadiny miaraka amin'ny tadiny, izay mety amin'ny fitaovana eo anelanelan'ny karazan-tsoratra roa.
Azafady mba ampahafantaro anay ny fitaovanao raha tsy fantatrao izay mpamporisika mety kokoa aminao. Hahazo vahaolana tsara indrindra avy aminay ianao.
A: Safidy fitaovana azo ovaina
Safidy material SS304 sy SS316L. Ary ireo fitaovana roa ireo dia azo ampiasaina miaraka.
Ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny vy tsy misy fangarony, ao anatin'izany ny teflon mifono, ny fanaovana sary an-tariby, ny famolahana ary ny fitaratra fitaratra, dia azo ampiasaina amin'ny faritra samihafa amin'ny blender.
B: fantsona isan-karazany
Ny fonosana ambony amin'ny barika vovoka dia azo namboarina arakaraka ny tranga samihafa.
C: ampahany mivoaka tsara
ny valizy famoahana blender azo entina tanana na pneumatic. Valve azo alefa: valve varingarina, valizy lolo sns.
Raha ny mahazatra dia manana tombo-kase tsara kokoa ny pneumatically noho ny manual. Ary tsy misy anjely maty ao amin'ny efitrano fampifangaroana sy tanker.
Fa ho an'ny mpanjifa sasany, ny valizy manual dia mora kokoa amin'ny fifehezana ny habetsahan'ny famoahana. Ary mety amin'ny fitaovana misy kitapo mikoriana izy io.
D: Fampiasana fanampiny azo fidina
Blender kofehy helika indroa indraindray mila manana fitaovana fanampiny noho ny filan'ny mpanjifa, toy ny rafitry ny palitao ho an'ny fanafanana sy ny fampangatsiahana, ny rafitra fandanjana, ny rafitra fanesorana vovoka, ny rafitra famafazana sns.
A: Hafainganana azo ovaina
Masinina blender blender azo namboarina ho haingam-pandeha azo ovaina amin'ny alàlan'ny fametrahana mpanova hatetika.
B: Rafitra fampidinana
Mba hanaovana ny fandidiana ny masinina blender indostrialy mety kokoa, tohatra ho an'ny mixer modely kely, sehatra miasa misy dingana ho an'ny mixer modely lehibe kokoa, na feeder ho an'ny famoahana mandeha ho azy dia misy daholo.
Ho an'ny ampahany mavesatra mandeha, misy karazany telo ny conveyor azo voafantina: conveyor screw, conveyor bucket ary conveyor vacuum. Hisafidy ny karazana mety indrindra mifototra amin'ny vokatrao sy ny toe-javatra misy anay izahay. Ohatra: ny rafi-pamoahana vacuum dia mety kokoa amin'ny famoahana fahasamihafana avo lenta, ary malefaka kokoa ary mila toerana kely kokoa. Ny conveyor screw dia tsy mety amin'ny fitaovana sasantsasany izay hihamontsina rehefa somary avo kokoa ny mari-pana, fa mety amin'ny atrikasa izay manana halavana voafetra. Mpitaingin-tsoavaly dia mety amin'ny conveyor granule.
C: Tsipika famokarana
Blender fehezan-droa afaka miasa miaraka amin'ny conveyor, ny hopper ary ny filler auger mba hamorona tsipika famokarana.
Tsindrio eto raha hahazoana antsipiriany bebe kokoa momba ny fifangaroana vovoka sy ny tsipika famenoana.
Ny tsipika famokarana dia mamonjy angovo sy fotoana betsaka ho anao raha mampitaha amin'ny fiasan'ny tanana.
Ny rafitra fampidinana dia hampifandray masinina roa hanomezana fitaovana ampy ara-potoana.
Tsy dia mandany fotoana ianao ary mitondra fahombiazana ambonimbony kokoa.
1. Mpanamboatra blender indostrialy ve ianao?
Shanghai Tops Group Co., Ltd dia iray amin'ireo mpanamboatra blender blender ao Shina, izay efa niasa tamin'ny indostrian'ny milina fanangonana nandritra ny folo taona. Namidinay ny masininay tamin'ny firenena 80 mahery manerana an'izao tontolo izao.
Ny orinasanay dia manana patanty famoronana maromaro amin'ny famolavolana blender ribbon ary koa ny milina hafa.
2. Manana mari-pankasitrahana CE ve ny blender vovonanao?
Tsy ny blender blender blender ihany fa ny masinintsika rehetra ihany koa no manana taratasy fanamarinana CE.
3. Mandra-pahoviana ny fotoana fandefasana blender ribbon?
7-10 andro vao mamokatra maodely mahazatra.
Ho an'ny milina namboarina dia azo atao ao anatin'ny 30-45 andro ny masininao.
Ankoatr'izay, ny masinina alefa amin'ny rivotra dia manodidina ny 7-10 andro.
Ny blender ribbon natolotry ny ranomasina dia manodidina ny 10-60 andro raha ny halavirana hafa.
4. Inona ny serivisy sy fiantohana ataon'ny orinasa anao?
Alohan'ny handefasanao ny baiko dia hampahafantatra anao ny antsipiriany rehetra izahay mandra-pahazoanao vahaolana mahafa-po avy amin'ny teknisiana anay. Azontsika atao ny mampiasa ny vokatrao na ny iray hafa any amin'ny tsenan'i Shina mba hitsapana ny masininay, avy eo hanomezana sakafo anao ilay video mba hampisehoana ny vokany.
Ho an'ny fe-potoana fandoavam-bola, azonao atao ny misafidy manaraka ireto:
Aorian'ny fanaovana ny baiko dia azonao atao ny manendry vatan'ny mpanara-maso hijerena ny blender vovoka ao amin'ny orinasa misy anay.
Ho an'ny fandefasana azy dia ekenay ny fe-potoana rehetra amin'ny fifanarahana toy ny EXW, FOB, CIF, DDU sns.
Warranty sy aorian'ny serivisy:
■ Fiantohana roa taona, fiantohana ny enin-taona, serivisy maharitra
(Homena voninahitra ny serivisy fiantohana raha tsy vokatry ny fiasan'olombelona na tsy mety ny fahavoazana)
■ Serivisy an-tranonkala na serivisy horonantsary an-tserasera
5. Manana fahaizana mamolavola sy manolotra vahaolana ve ianao?
Mazava ho azy, manana ekipa mpamorona matihanina sy injeniera za-draharaha izahay. Ohatra, nanamboatra tsipika famokarana mofo ho an'ny Singapore BreadTalk izahay.
6. Manana mari-pankasitrahana CE ve ny vovoka fampifangaroanao vovoka?
Eny, manana mari-pahaizana CE amin'ny fampifangaroana vovoka izahay. Ary tsy ny milina fampifangaro vovoka kafe ihany, ny masininay rehetra dia manana taratasy fanamarinana CE.
Ankoatr'izay, manana patanty teknika vitsivitsy amin'ny volavolan-tsolika blender vovoka isika, toy ny famolavolana famehezana ny hazo, ary koa ny mpameno endrika Auger sy ny endrika hafa fisehoan'ny masinina, endrika vovoka.
7. Inona avy ireo vokatra azon'ny mixer mixeur mixeur?
Ny mixer blender dia afaka mitantana ny karazana vovo-dronono na granule mifangaro ary ampiharina amin'ny sakafo, fanafody, simika sns.
Indostrian'ny fivarotam-panafody: ny vovo-pitsaboana rehetra na ny granule mifangaro toy ny vovoka aspirinina, vovoka ibuprofen, vovoka cephalosporin, vovoka amoxicillin, vovoka penicillin, vovo-tany clindamycin, vovo azithromycine, vovoka domperidone, vovo amantadine, vovoka acetaminophen sns.
Indostrian'ny simika: ny karazana fikolokoloana ny hoditra sy ny vovoka amin'ny tarehy na ny vovo-dronono mifangaro, toy ny vovoka voatoto, vovoka tarehy, pigment, vovo-maso, vovoka takolaka, vovoka manelatselatra, vovoka manasongadina, vovo-jaza, vovoka talcum, vovoka vy, soda lavenona, vovoka karbonika calcium, sombina plastika, polyethylene sns.
Tsindrio eto raha hijery raha afaka miasa amin'ny mixer blender mixer ny vokatrao.
8. Ahoana no fomba fiasan'ny blender amin'ny ribona indostrialy?
9. Ahoana ny fisafidianana blender kofehy indroa?
Misafidy blender kofehy indroa, ny zavatra voalohany dia ny manamarina raha mety ny blender ribbon.
Ny fantsom-pandrefesana vita amin'ny kofehy indroa dia mety amin'ny fampifangaroana vovoka na granule isan-karazany amin'ny hakitroka mitovy ary tsy mora tapaka. Izy io dia tsy mety amin'ny fitaovana izay hitsonika na hihitsoka amin'ny hafanana avo kokoa.
Raha ny vokatrao dia ny fifangaroana dia misy akora manana hakitroka samy hafa be, na mora vaky, ary izay hitsonika na hikikitra rehefa avo kokoa ny mari-pana, dia mamporisika anao izahay hisafidy ilay blender paddle.
Satria tsy mitovy ny fitsipiky ny asa. Afangaro amin'ny mixer ribbon ny fitaovana amin'ny lalana mifanohitra mba hahombiazana amin'ny fampifangaroana. Fa ny blender paddle kosa dia mitondra fitaovana hatrany ambanin'ny tanky ka hatrany ambony, mba hahafahany mitazona ny fitaovana feno ary tsy hampiakatra ny maripana mandritra ny fifangaroana. Tsy hanao fitaovana misy hakitroky lehibe kokoa hijanona eo amin'ny farany ambany tank.
Raha vao manamarina ny fampiasana ny blender ribbon dia tonga amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny maodelin'ny volavola. Ny blender kofehy avy amin'ny mpamatsy rehetra dia manana habetsahan'ny fampifangaroana mahomby. Raha ny mahazatra dia manodidina ny 70%. Na izany aza, misy ny mpamatsy sasany milaza ny maodelin'izy ireo ho totalin'ny fampifangaroana, raha toa kosa ny sasany toa anay dia miantso ny maodelin-tsiranoka blender ho fangaro fampifangaroana mahomby.
Ohatra, ny mpanamboatra TP dia mamokatra lafarinina 500kg isaky ny andiany, izay ny refiny dia 0,5kg / L. Ny vokatra dia 1000L isaky ny andiany. Ny tadiavin'ny TP dia ny blender ribbon mahazaka 1000L. Ary mety ny maodely TDPM 1000.
■ Kalitaon'ny blender
Ny farany fa ny tena zava-dehibe dia ny mifidy blender blender misy kalitao avo lenta. Ny sasany amin'ny antsipiriany toy izao manaraka izao dia ho an'ny referansa izay mety hisian'ny olana amin'ny blender ribbon.
Volavola fanadiovana mora: ny blender kofehy manadio mora dia hamonjy fotoana sy hery betsaka ho anao izay mitovy amin'ny vidiny.
10.Inona ny vidin'ny blender ribbon?
Ny vidin'ny blender ribbon dia mifototra amin'ny fahaiza-manao, safidy, fanaingoana. Azafady mba mifandraisa aminay mba hahazoana ny vahaolana blender mifanaraka aminao sy ny tolotrao.
11.Aiza no ahitana blender blender amidy eo akaikiko?
Izahay dia manana maso any amin'ny firenena maro, izay ahafahanao manamarina sy manandrana ny blender aminay, izay afaka manampy anao amin'ny fandefasana entana sy ny fadin-tseranana ary koa aorian'ny asa fanompoana. Ny hetsika fihenam-bidy dia atao isaky ny iray taona. Mifandraisa aminay mba hahazoana ny vidin'ny blender blender farany azafady.
Teo aloha: Fangaro mixer roa
Manaraka: Powder Auger Filler
Blender miharo marindrano
Masinina Blender Blender Industrial
Blender Ribbon Blender
Masinina Blender Blender Blender
Tabilao Blender Blender
Valve Blender famoahana valve
Blender Blender ho an'ny fampifangaroana vovoka maina
Blender Blender ho an'ny vovoka
Blender Blender ho an'ny fampifangaroana vovoka
Blender blender amidy
Masinina Blender Blender
Vidin'ny milina Blender Blender
Mpamokatra Blender Blender
Mpanamboatra Blender Blender
Faritra fampifangaroana kofehy
Vidiny Blender Blender
Blender vovoka Blender
Blender malefaka kely
Blender vy tsy misy fangarony